Site na onyinye a, tinye akwụkwọ na họtelu na Córdoba ma gaa na ngosi ya | Akụkọ Njem
Carmen Guillen | | Spain obodo, Córdoba, Mgbidi
nleta Córdoba na Eprel, Mee, Jenụwarị ma ọ bụ Machị ị ka ga-adị juo anya na ima-nma-ya na ima-nma-ya, ma n’enweghị mgbagha ọ bụla, ọnwa iji nwee obi ụtọ na Córdoba na isi ya na ịma mma ya bụ ugbu a na Mee. Ọzọ, ọ bụghị naanị na anyị ewetara gị ezigbo onyinye iji nọrọ na Córdoba na ngwụsị izu a na-abịanụ mana anyị na-ewetara gị 100% ozi dị mkpa iji mara ihe ị ga-ahụ n'obodo ahụ n'oge ịnọ gị.
Na nke a enye akwụkwọ ụlọ nkwari akụ na Córdoba ma gaa na ngosi ya, na-amalite na Satọdee na-esote ụbọchị nke 20 ma ghara ịkwụsị ruo ụbọchị 7 ka e mesịrị. Sevillanas, ebe nkiri, snails na salmorejo tapas, beers na ezigbo ikuku ... Ihe a na ọtụtụ ekele maka onyinye a Ebibi na anyị na-ewetara gị.
1 Kedu ihe a na-enye?
1.1 Kedu ihe kpatara ịhọrọ ụbọchị a?
2 Kedu ihe ị ga-eme ma hụ na Córdoba?
Kedu ihe a na-enye?
Anyị na-ewetara gị na-enye n'aka nke Ebibi ma ị nwere ike ịhụ ya na nke a njikọ. Dịka ị pụrụ ịhụ, ọ bụ abalị 2 na họtel na AC Córdoba n'obodo ahụ dị na Avenida de La Libertad, nke 24. Ọ bụ nnukwu ụlọ nkwari akụ nke ọma, ya na ọdụ ụgbọ oloko na ọdụ ụgbọ ala dị naanị nkeji 10 (na ụkwụ) ma dị ezigbo nso na etiti akụkọ ihe mere eme, ebe ị nwere ike ịga ụkwụ na enweghị nsogbu ọ bụla.
Dị ka ị pụrụ ịhụ, onyinye nke abalị abụọ maka abuo nwere ụgwọ nke 327 euro na họtel 5-kpakpando site na ọnụego nke 7,9 nke ndị ọrụ niile mere. Na ibe a, ị nwekwara ohere ịnweta ọrụ ahụ maka ihe bara uru karị ma ọ bụrụ na ịchọrọ nri ụtụtụ ma ọ bụrụ na kama ịnọdụ ụlọ dị mma, ịchọrọ inwekwu nkasi obi n'ime ụlọ deluxe.
Kedu ihe kpatara ịhọrọ ụbọchị a?
Dị ka anyị kwurula na mbụ, ụbọchị ahọpụtara ma chọọ ịnye gị ụlọ nkwari akụ a bụ site na Fraịde 19 (n'ọnụ ụzọ ụlọ nkwari akụ) ruo ụbọchị ụka 21 (ọpụpụ). Ihe kpatara ya doro anya ma dị mfe:
Ọ bụ ngwụsị izu nke ọ fọrọ nke nta ka onye ọ bụla nwee ụbọchị ezumike.
Na izu ụka ahụ Ihe ngosi Cordoba 2017 malitere, ihe ngosi pụrụ iche maka ndị na-enwetụbeghị obi ụtọ na ya ma ọ bụ na ha amatabeghị ihe ọ bụ iji nweta ngosi ngosi Andalusia na ụkwụ na ogige ahụ.
Kedu ihe ị ga-eme ma hụ na Córdoba?
Ọ bụrụ na, na mgbakwunye na ileta Córdoba maka ngosi ya, ịchọrọ iji oge fọdụrụ iji mụtakwuo banyere akụkọ ihe mere eme ya, ọdịbendị na ebe ndị a ma ama, mgbe ahụ anyị hapụrụ gị ụfọdụ n'ime ihe ndị ị na - enweghị ike ịkwụsị na-eme ma na-ahụ na a obodo akara obodo Southern Spain:
Alakụba, a ga-ahụ.
Towerlọ elu Malmuerta.
Thelọ nzukọ ndị Juu.
Oflọ nke Bailío.
Ndị Calleja de las Flores.
Conlọ obibi ndị nọn nke La Merced.
Obodo Ndị Juu.
Obí nke Marquis nke Viana.
The Alcázar de los Reyes Cristianos na ubi ya.
Ebe A Na-edebe Ihe Ochie.
Museumlọ ihe nkiri Julio Romero de Torres.
Oghere Corredera na Las Tendillas.
Museumlọ ihe nkiri nke Ethnobotany na Ogige Botanical.
Ebe obibi ndụ nke Al-Andalus.
Ekwuru m, nwee obi ụtọ na onyinye a maka Destinia, nke na-enye gị ụlọ nkwari akụ kachasị mma ahọrọ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnụ ụtọ ya, gafee nke a njikọ ma mara Córdoba, ị gaghị akwa ụta ahụmịhe ahụ!
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnye ụdị a iru email gị kwa izu na ọbụlagodi nke ka mma, ebe a ị nwere ike ịdenye aha. Akwụsịla ime ya!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Mgbidi » Site na onyinye a, tinye ụlọ oriri na nkwari akụ na Córdoba ma gaa na ngosi ya